Ikheji yokugcina yale mihla kwindawo yasemaphandleni
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguOla
I-Stabbur ukusuka kwinkulungwane ye-19 eyathi ngo-2019 yahlaziywa ngokupheleleyo kwaye yaphuculwa kwigumbi langoku elinazo zonke izixhobo, ngelixa umtsalane wakudala ukhathalelwa. Ibekwe emaphandleni, kwinkuni encinci kwifama iHoltan, kumasipala wase-Orkland, malunga neekhilomitha ezi-4 ukusuka eSvorkmo.
Ikheji yokugcina ixhotyiswe ngesantya esiphezulu se-intanethi kunye neTV ngefiber. Ikhitshi iqulethe yonke into ikhitshi yanamhlanje enokulindelwa ukuba ibe nayo. Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngeshawa ebanzi, yangasese exhonywe eludongeni kunye nomatshini wokuhlamba.
4.97 · Izimvo eziyi-93
Kude kufuphi nomnyango wangaphambili ungadibana namadlelo kunye neenkomo. Kukho namathuba okuhamba kakuhle "kumhlaba wonke" apho njengentlanzi yeendwendwe simahla eHåggådammen kunye nomlambo iVorma. Kwakhona akukho kude kumlambo i-salmon ethandwayo i-Orkla, eneminenga emininzi emihle kunokwenzeka ukuthenga iilayisensi zokuloba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Svorkmo